Madaxweynaha Puntland iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo ku sugan Dalka Telyaaniga(Sawiro) | raascasayrmedia.com
← Qoyskii danishka ee u gacan-galay burcad-badeeda oo laga dejiyay Xaafuun
Ku dhawaad 10 qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Nugaal →
March 2, 2011 · 8:54 pm
Madaxweynaha Puntland iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo ku sugan Dalka Telyaaniga(Sawiro)
Wafdiga Madaxweynaha waxa ka mid ah Wasiiru Dowlaha Maamul wanaagsa iyo Wasiirka Dastuurka iyo arrimaha Federaalka iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Puntland iyo masuuliyiinta la socda ayaa ku sugan Magaalada Rome ee Caasimada ah, waxayna halkaasi kula kulmeen masuuliyiin ka socota Dowlada Telyaaniga iyo Midowga Yurub, sidoo kale wafdiga madaxweynaha waxay kulamo la yesheen soomaalida ku dhaqan Magaalada Rome.
Maalinka beri ah ayaa la filayaa ama loo balansanyahay inuu qabsoomo kulan weyne ka dhacaya Jaamaca Rome halkaasi oo madaxweynah uu kula hadlaya soomaalida ku nool telyaaniga iyo marti sharf kale oo ay ku jiraan masuuliyiinta dalka.
Madaxweynaha Puntland ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay dalkan, gaar ahaan waxa soo dhoweyn wanaagsan iyo wadaninimo muujiyay shacabka Puntland ee ku dhaqan dalkan oo ay horkacayaan masuuliyiinta Jaaliyadda Puntland sida Gudoomiyaha Jaaliyadda Mudane Cawaale Jaamac Salaad.
Wafdiga madaxweynaha soo dhowedyntiisa waxa sidoo kale ka qayb qaatay Dr. Maxamed Jaamac Salaad oo ah dhakhtar reer Puntland ah oo ku xeel dheer cuduradda Neerfaha.
Waxa jira sidoo kale kulamo goono gooni ah oo dherxmaray Madaxweynaha iyo Jaaliyadda Puntland.